Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Disney Cruise Line eya kwiindawo ezintsha ngo-2023
Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Ukubambisa
Ekuqaleni kuka-2023, iDisney Cruise Line iya kubuyela kwiindawo ezishushu zaseBahamas-kubandakanya isiqithi sabucala saseDisney, iCastaway Cay- kunye neCaribbean kunye neRiviera yaseMexico. ulwandle. Iindidi zeendlela zokwenza umtsalane ziya kususa unxweme ukuya kunxweme ukusuka kwizikhululo zamakhaya zaseMelika kubandakanya iMiami kunye nePort Canaveral, eFlorida; ENew Orleans; EGalveston, eTexas; kunye neSan Diego.
I-Disney Cruise Line iya kudala ulonwabo ngakumbi elangeni kunanini na ngaphambili ngohambo lokuhamba ukusuka kwi-Sunshine State ekuqaleni kuka-2023, ukutyelela iindawo ezikweleenjiko kwiBahamas naseCaribbean. Iinqanawa ezimbini ziya kuhamba ngomkhumbi zisuka ePort Canaveral kufutshane neOrlando, eFlorida, kwaye inqanawa yesithathu izakusuka eMiami. Zonke iinqanawa ezivela eFlorida ziquka ukutyelela kwi-oasis yesiqithi sase-Disney yangasese, eCastaway Cay.
Ukusuka ePort Canaveral, i-Disney Wish iza kuhamba ngomkhumbi iye e-2023 ngohambo lweentsuku ezintathu nobusuku obunye ukuya eNassau, eBahamas naseCastaway Cay. Ukuhamba ngenqanawa ngenqanawa entsha kaDisney kudibanisa ukonwaba okutsha kunye nokubalisa amabali, kunye nenkonzo engenakuthelekiswa nanto kunye namaxesha omlingo abathandwa ziindwendwe xa behamba ngeDisney.
Ukusuka ePort Canaveral, iDisney Fantasy izakuqala unyaka ngokuhamba ngenqanawa ubusuku obusixhenxe ukuya kwiindawo ezininzi ozithandayo eMpuma nakwiNtshona yeCaribbean. Ukongeza, ukuhamba ngenqanawa ngobusuku obusibhozo kubandakanya iintsuku ezimbini kwiBermuda entle, apho iindwendwe zinokutshisa ilanga kumanxweme esanti apinki kwesi siqithi, ziyonwabele imidlalo yezamanzi eyonwabisayo okanye ziphonononge indawo esemagqabini yesiqithi seCrystal.
Ukusuka eMiami, iDisney Dream izakuqala ukuhamba ngenqwelomoya ngobusuku obune-ezintlanu ukuya kwiindawo ezibandakanya iGrand Cayman, iNassau, iCastaway Cay kunye neCozumel, eMexico. Ukonwaba ngakumbi kwesiqithi sabucala kusekhitshini ngolunye uhambo olukhethekileyo lokuhamba ngenqwelomoya ezintlanu olubandakanya iindawo ezimbini zokuma eCastaway Cay.
Kuzo zonke iindawo zokuhamba eFlorida, iindwendwe zinokonwaba kuhambo olunikezela into kuwo onke amalungu osapho, ngokudibanisa i-adventure kunye nokuphumla kweendawo ezishushu, ukukhululeka kunye nokuzonwabisa kolwandle, kunye nokuzonwabisa okumgangatho wehlabathi kunye nenkonzo yeDisney. iholide.
Iitropical Escapes ezivela eTexas naseNew Orleans
NgoJanuwari nangoFebruwari, iDisney Magic iza kuhamba ngomkhumbi isuka eGalveston, eTexas, ngeendlela ezahlukeneyo ezine, ezintlanu, ezintandathu kunye nezisixhenxe zobusuku ukuya eBahamas naseNtshona Koloni. Amazibuko akweleenjiko okufowuna aquka iGrand Cayman kunye neCozumel kunye neProgreso, eMexico.
NgoFebruwari nango-Matshi, iDisney Magic "iya ezantsi kwi-bayou" okokuqala ngexesha lokuqala kwetyala eNew Orleans. Ukusuka embindini we-The Big Easy, ecaleni komfula omkhulu waseMississippi, ukuhamba ngenqanawa ubusuku obune, ezintlanu kunye nobusuku obathandathu kuya kubiza indawo ezitshisayo zaseGrand Cayman naseCozumel.
Ngaphambi okanye emva kohambo lwabo lwaselwandle lweDisney, iindwendwe zinokungena kwisiXeko saseCrescent ukuya kunandipha incasa eyahlukileyo yokutya okwaziwayo kwaseNew Orleans, zonwabele iingoma ezimnandi zomculo wejazz owaziwayo kwihlabathi liphela kwaye ziqaphele izinto ezibonakalayo kunye nezandi ezikhuthaze umboniso bhanyabhanya othandekayo “ Inkosazana neFrog. ”
Lonke uhambo luka-2023 Disney Magic lubandakanya iintsuku ezimbini okanye ezintathu elwandle ukonwabela ulonwabo, ulonwabo, ukuphumla kunye neenkumbulo.
IBaja Peninsula Getaways ezivela eSan Diego
I-Disney Wonder iya kubuyela kuNxweme oluseNtshona, i-San Diego ngo-Epreli nango-Meyi. Iinqwelomoya eziya eBaja, eMexico kunye naseMexico Riviera ziya kuthutha iindwendwe ziye elunxwemeni elishushu eligcwele inkcubeko edlamkileyo, iilwandle ezibengezelayo, iindawo ezingaphandle ezisebenzayo kunye namanzi amnandi.
Ukuhamba ngesikhephe ukusuka eSan Diego kuya kuba phakathi kobusuku obuthathu ukuya kwesixhenxe. Olunye uhambo oluya kwi-peninsula yaseBaja luza kubiza isixeko esithandekayo sase-Ensenada, esaziwa ngamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomhlaba weentaba. Ukuhamba okuninzi kuya kubandakanya utyelelo eCabo San Lucas, indawo oyithandayo enamatye amakhulu kunye neelwandle esimhlophe esimhlophe.
Iindlela zokuhamba ubusuku obasixhenxe ziya eMazatlan, "iPearl yePasifiki," ezaliswe yimimangaliso yendalo, inkcubeko kunye nembali emibalabala, nasePuerto Vallarta, indlela entle yokubaleka ngaselwandle ebekwe ecaleni kwegophe leBanderas Bay kunye nemida iintaba ezimangalisayo zaseSierra Madre.